Telefoon ku meel gaadh ah oo la tuuri karo ▷ Ku sms onlayn nambar cusub · Nambar cusub oo lagu daray 10 daqiiqo ka hor · ONLINE-SMS.ORG · 10 min number
Tirooyinka aan shaqayn
Iibso Gaar ah
Wadamada la heli karo
Ku hel SMS onlayn lambar taleefan ku meel gaar ah oo cusub oo bilaash ah
La heli karo 43 lambarada. Nambar cusub ayaa lagu daray 11 saac kahor.
Wadamada oo dhan (43) Ruushka (4) Mexico (1) Ukraine (1) Kanada (1) Isbayn (1) Australia (1) Morocco (1) El Salvador (1) Kazakhstan (1) Poland (1) Finland (1) Brazil (1) Nederlaan (1) Boqortooyada Ingiriiska (1) Latfiya (1) Maraykanka (1) Faransiiska (1) Iswiidhan (1) Ireland (1) Thailand (1) Turkiga (1) Romania (1) Uganda (1) Puerto Rico (1) Ghana (1) Indonesia (1) New Zealand (1) Malaysia (1) Belgium (1) Portugal (1) Czech Republic (1) Hong Kong SAR Shiinaha (1) Estonia (1) Filibiin (1) Lithuania (1) Talyaaniga (1) Myanmar (Burma) (1) Awstariya (1) Nigeria (1) Jarmalka (1)
1013 21 ilbidhiqsi kahor
2108 22 ilbidhiqsi kahor
873 1 daqiiqo kahor
4418 4 daqiiqo kahor
3114 2 isbuuc kahor
3023 10 daqiiqo kahor
700 10 saac kahor
45448 10 saac kahor
25350 4 saac kahor
706 26 daqiiqo kahor
173 25 daqiiqo kahor
301 18 daqiiqo kahor
747 3 daqiiqo kahor
1069 4 daqiiqo kahor
5754 11 saac kahor
3010 2 daqiiqo kahor
1454 1 daqiiqo kahor
784 1 daqiiqo kahor
2668 24 ilbidhiqsi kahor
1258 20 ilbidhiqsi kahor
568 19 ilbidhiqsi kahor
7957 11 saac kahor
3075 11 saac kahor
1023 2 isbuuc kahor
23490 14 saac kahor
405 1 isbuuc kahor
589 3 maalmood kahor
488 2 maalmood kahor
8076 23 saac kahor
7942 22 saac kahor
17570 21 saac kahor
3470 15 saac kahor
13019 14 saac kahor
9197 11 saac kahor
Hong Kong SAR Shiinaha
23529 12 saac kahor
13924 12 saac kahor
2274 11 saac kahor
443 11 saac kahor
8391 11 saac kahor
4749 11 saac kahor
62989 11 saac kahor
7873 11 saac kahor
6318 19 ilbidhiqsi kahor
Hel nambar telefoon ku meel gaar ah si aad u hesho sms onlayn is diwaangelin la\_'aan
Online-sms.org waxay ku siisaa soo dhawaynta SMS-ka bilaashka ah ee nambarada telefoonada la tuuri karo iyo kuwa ku meel gaarka ah ee onlayn. Waxaad ku isticmaali kartaa teleefankeena gacanta lacag la\_'aan adoon bixinin sms-ka soo socda ama diwaangelin xisaab. Diiwaangeli xisaabaadka cusub adigoo isticmaalaya nambaradayada ku meel gaarka ah. Hel koodka SMS-ka ee bilaashka ah in ka badan 300 apps iyo goobaha sida WhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegram, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail iyo in ka badan. Haddii aad u malaynayso inay fiican tahay, fadlan la wadaag saaxiibadaa goobta soo dhawaynta SMS.
Waa maxay lambarka taleefanka casriga ah? Halkii laga heli lahaa kaarka SIM-ka, nambarku wuxuu ku jiraa daruuraha dhexdiisa. Markaa waxaad ku heli kartaa SMS online meel kasta oo aduunka ka mid ah adigoon dhib u qabin socodka. Si aad u hesho SMS lambarka been abuurka ah waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sugto 1-10 daqiiqo, xawaaraha risiidhka sms-ku wuxuu ku xiran yahay qofka soo diray. Waxaan cusbooneysiineynaa liiska lambarrada gacanta maalin kasta. Dhammaan nambaradayada waa in loo qaataa sida la tuuri karo ama nambar ku meel gaar ah si loo helo sms sababtoo ah tirada sms-ka bilaashka ah lafteedu waxay ka dhigan tahay in dhowr qof ay isticmaali karaan hal mar, oo aan la kaydin oo ka dib markaad joojiso SMS-ga. Nambarku wuxuu tagi doonaa heerka "offline" oo wuxuu tagi doonaa lambarrada aan shaqayn. soo celinta sms soo dhaweyntu waa wax aan macquul aheyn. Markaa ha u isticmaalin inaad diiwaangeliso xisaabaadka muhiimka ah.
Markaa, waxaad u baahan tahay inaad aqbasho sms si aad ugu xaqiijiso akoonkaaga sms si aad sidaas u samayso:
➊ Dalka lambarka ka dooro wadamada kor ku xusan
➋ Dooro nambar telefoon oo lacag la\_'aan ah oo ku qeex shabakada u baahan
➌ Guji nambarada waxaadna geli doontaa sanduuqa lambarka la doortay.
Waxaad ka heli kartaa fariimaha qoraalka ah ee ugu badan ee aad rabto dhammaan goobaha marka laga reebo lacag bixinta iyo nidaamka bangiyada.
Waa maxay soo dhawaynta qoraalka ee diyaar ah
Soo dhaweynta sms-ka bilaashka ah ayaa lagu heli karaa nambarada ku meel gaarka ah ee US, China, England, Germany, Australia, Indonesia, Korea, Morocco, America, Albania, Malaysia, India, Turkey, Sweden, Russia. Qadarka lambarada la heli karo ee waddan kasta waxaa lagu arki karaa adigoo gujinaya magaca waddanka.
Fiiro gaar ah: Uma baahnid inaad dib u cusbooneysiiso bogga. Dhammaan fariimaha ayaa isla markiiba yimaada marka ay ku jiraan server-kayaga.
Waa maxay lambarka ku meel gaadhka ah ama la tuuri karo?
43 Nambarka taleefanka la tuuri karo waxaa si rasmi ah loogu yaqaan lambarka taleefanka ku meel gaarka ah, taas oo macnaheedu yahay in nambarada la heli karo waqti xaddidan, laga bilaabo 10 daqiiqo ilaa dhowr maalmood. Dhammaan nambarada telefoonka waa la wadaagaa, qof kastaa wuu arki karaa fariimaha soo socda. Waxaad u isticmaali kartaa nambarada telefoonka ku meel gaarka ah ee bilaashka ah ee sms si loo xaqiijiyo xisaabaadka, helitaanka fariimaha qoraalka ah ee macluumaadka qarsoodiga ah, diiwaangelinta xisaabaadka ilaha kala duwan, helitaanka qoraalka sms, si loo xaqiijiyo xisaabaadka. Nambarada teleefanada dhabta ah waa ku haboon yihiin haddii aad rabto inaad iska diiwaan geliso akoon la\_'aanteed lambarka taleefanka dhabta ah oo aad rabto sir dheeraad ah. Sababaha kale ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah ganacsiga, ujeedooyinka isku xidhka, iyo xidhiidhka dad cusub.
Markaad la shaqaynayso online-sms.org nambarada farsamada fadlan ka digtoonow, in aan la ogolayn in la isticmaalo nambarada taleefoonka si loo diiwaan geliyo goobaha nidaamka lacag bixinta elektiroonigga ah, ururada bangiyada. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaaba ku jira liiska madow, markaa isticmaaluhu ma awoodi doono inuu farriimaha ka helo ciwaanadan. Intaa waxaa dheer, maamulku wuxuu siinayaa macluumaad kasta oo lagama maarmaan ah hay\_'adaha fulinta sharciga marka la codsado, haddii ay codsadaan macluumaadka ku saabsan qofka ku lug leh wax kasta oo qorshayaal sharci darro ah.
Nambarada hubinta mobilada ayaa kaa caawinaya ilaalinta qarsoodigaaga.
Qarsoonaantaada aad bay muhiim u tahay. Nambarada teleefankeena ku meel gaarka ah, uma baahnid inaad ku bixiso lambarkaaga telefoonka dhabta ah mareegaha u baahan xaqiijinta fariinta qoraalka.
Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ilaaliso aqoonsigaaga kana fogaato wicitaanada iyo fariimaha spamka ah.
Waxaanu bixinaa lambaro telefoon oo been abuur ah oo bilaash ah oo wata soo dhawaynta fariin qoraaleedka onlaynka ah wakhti kasta oo aad u baahato. Online-sms.org waxay la shaqaysaa hawlwadeennada mobilada, si aan maalin walba ugu dari karno lambaro cusub oo SMS ah.
Mamnuuca Nambarka Intarneedka
Dhammaan nambarada waxay leeyihiin filtar toos ah oo xannibaysa farriimaha laga helo hababka lacag-bixinta, ku-qorista lacag-bixinta iyo hay\_'adaha kale ee maaliyadeed.
Ma rabtaa nambar kuleyl cusub? La wadaag boggan oo noo qor!
Hel SMS ilaa nambarada ku meel gaadhka ah si loo xaqiijiyo a::
SIM GAAR AH